Prisoners (2013) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
” ကြှနျတျောတို့တတှရေဲ့ ဘဝ အဓိပ်ပါယျ ကြှနျတျောတို့ တနျဖိုးထားမွတျနိုးရတဲ့ လူတှကေို ဆုံးရှုံးရတဲ့အခါ ကြှနျတျောတို့တကယျပဲ
မကောငျးဆိုးဝါး တဈပိုငျးဖွဈသှားကွသလား”ဒီကားရဲ့ Main cast တှကေတော့ Hugh Jackman နဲ့ Jake Gyllanhaalပါ။ သူတို့ ပါနတောနဲ့တငျ ဘာမှဆကျ ညှနျးဖို့ မလိုလောကျအောငျပါပဲ။အဖဇောတျရုပျတှနေဲ့ အတျောစားတဲ့ Hug Jackmanဟာ Logan တို့ Greatest Showman တို့ တို့မှာ အတျောလေး ဈာနျဝငျခဲ့သလို ဒီကားထဲမှာလညျး သမီးပြောကျလို့ ပူပနျနရေတဲ့ အဖတေဈယောကျအနနေဲ့ လုံးဝ Perfect ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ Jake Gyllanhaal ရဲ့ ဟနျကလညျး အတျောလေး သဘောကစြရာကောငျးတာကို တှရေ့မှာပါ။
မွို့ကလေးတဈမွို့မှာ ဖွဈလာမဲ့ အရာရာတိုငျးအတှကျ အသငျ့ပွငျထားရမယျဆိုတဲ့ အတှေးအချေါနဲ့ Keller(Hugh)ဆိုတဲ့ လူလတျတနျးစားတဈယောကျ ရှိပါတယျ။ ကြေးဇူးတျောနမှေ့ာ တဈဖကျလမျးက အိမျကို စားသောကျပှဲတဈခုသှားရငျး အိမျရှငျရဲ့ သမီးလေးနဲ့ Kellerအိမျကို
ပွနျသှားရငျး Keller ရဲ့ သမီးလေး ပြောကျဆုံးသှားပါတယျ။လိုကျသမြှ အမှု မအောငျမွငျတာ မရှိသေးတဲ့ စုံထောကျLoki (Jake) ဟာ ဒီအမှုကိုကိုငျတှယျဖို့ ဖွဈလာခဲ့တယျ။သမီးအတှကျ ကမူးရှုးထိုးဖွဈနတေဲ့ Kellerရဲ့ အဖတေဈယောကျရဲ့ ဘာမဆိုလုပျရဲတဲ့သတ်တိနဲ့ သမီးကို ရှာဖှမှေုတှေ ရဲကောငျး တဈယောကျဖွဈတဲ့ Jake ရဲ့ သမာသမတျကကြ ရှာဖှမှေုတှနေဲ့ ရှုပျထှေးလှနျးတဲ့အမှုက တဈကားလုံး အဆုံးထိ ဆှဲဆောငျသှားပါလိမျ့မယျ။ဒီဇာတျကားမှာ စုံထောကျ Loki ကယျခဲ့တဲ့ လူ၂ယောကျကို ကယျတဲ့ အခနျးလုံးဝမပွသှားခဲ့ပါဘူး… ဒီနညျးနဲ့ပဲ အဆုံးသတျမှာ တဈစုံတဈရာကို သဘောပေါကျစခေဲ့တဲ့ ဒါရိုကျတာရဲ့ Idea ကို မခြီးကြူးလို့ မရပါဘူး။
Genreက Crime,Drama,Mysteryပမေဲ့ Hugh ရဲ့ သမီးဇောကပျ သရုပျဆောငျမှုတှမှော Thriller ဆနျဆနျရသကိုလညျး ခံစားရမှာပါ။Actor ကောငျးကောငျး Acting ကောငျးကောငျး.. Plot twist ကောငျးကောငျး. ဇာတျအိမျခိုငျလှနျးပွီး အဆုံးသတျထိ တဈစကျလေးမှ မှနျးဆဖို့ မလှယျတဲ့ ကားကောငျးတဈကား ရှာနတေယျဆိုရငျတော့ “Prisoners”ဟာ ကားရှေးမမှားမဲ့ ဇာတျကားပါပဲ။
” ကျွန်တော်တို့တတွေရဲ့ ဘဝ အဓိပ္ပါယ် ကျွန်တော်တို့ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးရတဲ့ လူတွေကို ဆုံးရှုံးရတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲ
မကောင်းဆိုးဝါး တစ်ပိုင်းဖြစ်သွားကြသလား”ဒီကားရဲ့ Main cast တွေကတော့ Hugh Jackman နဲ့ Jake Gyllanhaalပါ။ သူတို့ ပါနေတာနဲ့တင် ဘာမှဆက် ညွှန်းဖို့ မလိုလောက်အောင်ပါပဲ။အဖေဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ အတော်စားတဲ့ Hug Jackmanဟာ Logan တို့ Greatest Showman တို့ တို့မှာ အတော်လေး ဈာန်ဝင်ခဲ့သလို ဒီကားထဲမှာလည်း သမီးပျောက်လို့ ပူပန်နေရတဲ့ အဖေတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုံးဝ Perfect ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Jake Gyllanhaal ရဲ့ ဟန်ကလည်း အတော်လေး သဘောကျစရာကောင်းတာကို တွေ့ရမှာပါ။
မြို့ကလေးတစ်မြို့မှာ ဖြစ်လာမဲ့ အရာရာတိုင်းအတွက် အသင့်ပြင်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ Keller(Hugh)ဆိုတဲ့ လူလတ်တန်းစားတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်နေ့မှာ တစ်ဖက်လမ်းက အိမ်ကို စားသောက်ပွဲတစ်ခုသွားရင်း အိမ်ရှင်ရဲ့ သမီးလေးနဲ့ Kellerအိမ်ကို
ပြန်သွားရင်း Keller ရဲ့ သမီးလေး ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။လိုက်သမျှ အမှု မအောင်မြင်တာ မရှိသေးတဲ့ စုံထောက်Loki (Jake) ဟာ ဒီအမှုကိုကိုင်တွယ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သမီးအတွက် ကမူးရှုးထိုးဖြစ်နေတဲ့ Kellerရဲ့ အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ ဘာမဆိုလုပ်ရဲတဲ့သတ္တိနဲ့ သမီးကို ရှာဖွေမှုတွေ ရဲကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jake ရဲ့ သမာသမတ်ကျကျ ရှာဖွေမှုတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့အမှုက တစ်ကားလုံး အဆုံးထိ ဆွဲဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာ စုံထောက် Loki ကယ်ခဲ့တဲ့ လူ၂ယောက်ကို ကယ်တဲ့ အခန်းလုံးဝမပြသွားခဲ့ပါဘူး… ဒီနည်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်မှာ တစ်စုံတစ်ရာကို သဘောပေါက်စေခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာရဲ့ Idea ကို မချီးကျူးလို့ မရပါဘူး။
Genreက Crime,Drama,Mysteryပေမဲ့ Hugh ရဲ့ သမီးဇောကပ် သရုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ Thriller ဆန်ဆန်ရသကိုလည်း ခံစားရမှာပါ။Actor ကောင်းကောင်း Acting ကောင်းကောင်း.. Plot twist ကောင်းကောင်း. ဇာတ်အိမ်ခိုင်လွန်းပြီး အဆုံးသတ်ထိ တစ်စက်လေးမှ မှန်းဆဖို့ မလွယ်တဲ့ ကားကောင်းတစ်ကား ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ “Prisoners”ဟာ ကားရွေးမမှားမဲ့ ဇာတ်ကားပါပဲ။
Option 1 Direct Download 606 MB SD (480p)
Option2megaup.net 606 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 606 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 606 MB SD (480p)
Option5megaup.net 1.7 GB HD (1080p)
Option6Direct Download 1.7 GB HD (1080p)
Option 8 sharer.pw 1.7 GB HD (1080p)
Option9Direct Download 4.2 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 10 megaup.net 4.2 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 yuudrive.me 4.2 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 12 sharer.pw 4.2 GB FHD (1080p) DTS 5.1